HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo wax ka badashay Basaboorka Weyn iyo Kaararka Aqoonsiga ee Dalka
November 19, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Marka loo eego bilaysku, qaabka cusub wuxuu noqon doonaa mid ammaan ah oo ka sii wanaagsan xagga been-abuurka iyo xadgudubka ee dhici jiray.
Baasaboorrada waxaa ka mid ah waxyaabo ay ka mid yihiin, sawirro qofka sita oo ka muuqda Basaboorka qaab ka duwan sidii hore oo amaan ah.
Dukumeentiyada cusub waxaa sidoo kale ka mid ah sawiro dabiici ah iyo meelaha cagaaran ee lagu garto Sweden, sida caleemaha dhaca iyo kuwa kale.
Booliisku waxay aaminsan yihiin, in baasaboorka cusub uu ka fiicnaan doono ka hortagga iyo yaraynta isticmaalka khaldan ee dukumentiyada iyo aqoonsiga asalka ah. Sidaa darteed, goobta saxiixa baasaboorka ayaa sidoo kale la bedeli doonaa oo loo wareejin doonaa gudaha jaldiga hore ee baasaboorka.
Waxa kale oo jiri doona tafaasiil kale oo dhinaca ammaanka ah, oo ay ku jiraan in lagu daboosho sawirka qofka baasaboorka haysta oo leh “hab ka ilaalin beddelmi kara” oo ka ilaalinaya faragelinta iyo been-abuurka.
Marka lagu daro isbeddellada muuqaalka, qaybta dhijitaalka ah ayaa sidoo kale lagu cusboonaysiiyay qeyb cusub oo leh ilaalin sireed oo la hagaajiyay, booliisku waxay ku qoreen shabakadood